Ulefone Armor 5, ngwa siri ike nke nwere ihe eji mara ọkwa, ka ekwuputara | Gam akporosis
Ulefone kwupụtara ọkwa Armor 5, mkpanaka siri ike nke ga-abata na ihe ọhụụ ọhụụ ahụbeghị na ngwaọrụ ndị na-eguzogide usoro a: ọkwa.
Nke a gụnyere ihe ọhụụ na-atọ ụtọ, ebe ọ bụ na ọkwa ahụ, ọ bụ ezie na achọtara ya na ngwaọrụ ndị dị ala, lekwasịrị anya, karịa ihe ọ bụla, na etiti etiti na ekwentị dị elu, ọ bụghị na ọdụ ụgbọ ala.
Ejiri Ulefone Armor 5 nwere ihuenyo yiri nke nke iPhone X ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọdịdị. Nke a bụ 5.85-anụ ọhịa 1.520 x 720-pixel HD + na akụkụ 18.9: 9 na ọkwa dị na elu. Ngwurugwu ndị dị mkpa, nke ejiri ya, na-enye ohere ruru ogo 91% na-ahụ na, maka nchekwa ya, Corning Gorilla Glass 4 kpuchiri ya.
O nwere igwe isi Mediatek MT6763 nwere isi asatọ na 2.0GHz tinyere 4GB RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime nke na-anabata mgbasa site na microSD ruo 256GB. Ọ na-abịa na ntọala 16MP + 5MP igwefoto azụ azụ na 13MP n'ihu otu ihe mmetụta, yana nnukwu batrị 5.000mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ. N'ikpeazụ, ọ nwere onye na-agụ akara mkpịsị aka dị n'okpuru kamera azụ, yana nkwado maka mmeghe ihu, NFC, na Google Pay with Android 8.1 pre-arụnyere.
Banyere àgwà nlanarị ya, abịa na asambodo IP68, nke pụtara na ọ nwere ike ịgba ọsọ n'ọtụtụ gburugburu n'èzí, dị ka oké mmiri ozuzo, apịtị, na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ebudatara ya na ọtụtụ ngwa gụnyere kompas, tọọchị, larịị, nghọta oyiyi, ogo dị elu, iko dị elu, mkpu na pịrịm.
Ọnụ na nnweta nke Ulefone Armor 5
Ekwuputara ngwaọrụ a maka August 6, ụbọchị nke anyị nwere ike inweta ya n'ahịa. Egobeghị ọnụahịa ya, mana ka ụbọchị ahụ na-eru nso, ma ọ bụ kpomkwem n'ụbọchị mmalite ahụ, anyị ga-ama.
Maka ozi ọzọ banyere ngwaahịa a, gaa na ukara website nke ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ulefone Armor 5, ngwa siri ike nke nwere ọkwa, ka ekwuputara na ọkwa
Iwu olu bara uru nke Google Assistant maka otu ụbọchị n'ụsọ osimiri